प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियम: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी खेलहरु घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण समुदाय कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियम: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियम: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
प्रोटोनिक्स (प्यान्टोप्राजोल) र नेक्सियम (एसोमेप्रजोल) दुई औषधी हुन् जसलाई पाचन पथको समस्याहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी)। गर्ड एक पुरानो अवस्था हो जुन पेटको एसिड नियमित रूपमा पेटबाट घुटकीमा फर्काउँदा विकसित हुन्छ। यसले ईरबिन जस्ता लक्षणहरू र ईरोसिव एसोफाइगिटिस जस्ता बढी गम्भीर जटिलताहरूमा निम्त्याउन सक्छ।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम दुबै प्रोटोन पम्प इनहिबिटरहरू (पीपीआई) भन्ने औषधि वर्गको भाग हुन्। तिनीहरू पेटमा प्रोटोन पम्पहरू रोक्न काम गर्दछन्, जो एसिडको उत्पादनको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। प्रभावमा, प्रोटोनिक्स र नेक्सियमले पेटमा एसिडको समग्र उत्पादन कम गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
प्रोटोनिक्स, जुन फाइजरद्वारा निर्मित हो, प्यान्टोप्राजोलको ब्रान्ड नाम हो। यो एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन वयस्कहरू र years बर्ष र अधिक उमेरका बच्चाहरूमा इरोसिभ एसोफैगिटिसको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो २० मिग्रि र mg० मिलीग्राम ढिलाइ-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ, साथै mg० मिलीग्राम तरल निलम्बन। केहि केसहरूमा, प्रोटोनिक्स इंट्रावेनस (IV) इंजेक्शनको रूपमा प्रशासित हुन सक्छ।
नेक्सियम एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित हो र एसोमेप्राझोलको ब्रान्ड नाम हो। यो प्रिस्क्रिप्शन वा ओभर-द-काउन्टर (OTC) औषधिको रूपमा उपलब्ध छ जुन वयस्क, बच्चाहरू, र १ महिना र सो भन्दा बढि उमेरका शिशुहरूमा GERD को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रोटोनिक्स विपरीत, Nexium एक २० मिलीग्राम र mg० मिलीग्राम ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूलको रूपमा आउँछ। Nexium एक २. mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम तरल निलम्बनको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? पन्तोप्राजोल एसोमेप्राजोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ढिलाइ भएको रिलिज ट्याब्लेट
तरल निलम्बनका लागि Granules प्याकेट
ईन्जेक्शन को लागी नली पाउडर ढिलाइ भएको रिलिज क्याप्सूल
ईन्जेक्शन को लागी नली पाउडर
मानक खुराक के हो? 40 मिलीग्राम दैनिक एक पटक २० वा mg० मिलीग्राम दैनिक एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? Weeks हप्ता सम्म To देखि weeks हप्ता अवस्था अनुसार उपचार गर्दैछ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र years बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क, बच्चाहरू, र १ महिना र सो भन्दा बढि उमेरका शिशुहरू
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम द्वारा उपचारित अवस्थाहरू
प्रोटोनिक्स र नेक्सियमले दुबै GERD र GERD सँग सम्बन्धित सर्तहरूको उपचार गर्न सक्छ, जस्तै एसिड रिफ्लक्स (मुटुको जलन)। दुबै औषधीहरू पनि एफडीएलाई इरोसिभ एसोफैगिटिस, वा एसोफैगसको अस्तरको जलनको उपचारको लागि अनुमोदित छन्।
उच्च रक्तचाप को लागी सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक उपचार
नेक्सियम हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी (एच। पाइलोरी) संक्रमणको उपचारको लागि पनि एफडीए स्वीकृत छ। यस प्रकारको संक्रमण विकसित हुन्छ जब एच। पाइलोरी ब्याक्टेरियाले पाचन पथलाई स inf्क्रमित गर्दछ, जसले अल्सर निम्त्याउन सक्छ। एच। पाइलोरीले उत्पन्न अल्सरको अतिरिक्त, नेक्सियमले ननस्टेरियल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) सँग सम्बन्धित अल्सरको जोखिमलाई रोक्न सक्छ।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम दुबै हाइपरसेक्रेटरी अवस्थाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै झोलिंगर-एलिसन सिन्ड्रोम। यी सर्तहरू पेट एसिडको अत्यधिक उत्पादनले चित्रण गर्छ। प्रोटोनिक्स र नेक्सियम पेप्टिक अल्सरको उपचार गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले डुओडेनल र पेट दुखालाई समेट्छ।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम केवल अल्पकालिक प्रयोगको लागि सिफारिश गरिन्छ, वा प्रायः जसो केसहरूमा आठ हप्ता सम्म।
सर्त प्रोटोनिक्स Nexium
एच। पाइलोरी संक्रमण अफ-लेबल हो
NSAID- सम्बन्धित पेट अल्सरको जोखिम न्यूनीकरण अफ-लेबल हो
ग्रहणी अल्सर अफ-लेबल अफ-लेबल
पेट अल्सर अफ-लेबल अफ-लेबल
ईर्ष्या अफ-लेबल हो
के प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम अधिक प्रभावकारी छ?
क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखाए कि पान्टोप्राजोल र एसोमेप्रजोल त्यस्तै प्रभावकारी छन्। एउटा क्लिनिकल परीक्षण प्रभावकारिता तुलना GERD को साथ बिरामीहरुमा ant० मिलीग्राम pantoprazol को mg० मिलीग्राम esomeprazole को। करीव 580० बिरामीहरूलाई,,,, वा १२ हप्ता उपचारमा प्यानटोप्राजोल वा एसोमेप्रजोल प्राप्त गर्न अनियमित गरिएको थियो। दुबै पीपीआईको साथ समान दरहरूमा GERD को पूर्ण छुट।
एक अनियमित, डबल-ब्लाइन्ड क्लिनिकल परीक्षणमा, पेन्टोप्राजोल र एसोमेप्रजोलको प्रभावकारिता GERD को उपचारको लागि तुलना गरिएको थियो। करीव २०० बिरामीहरूलाई या त दैनिक 40० मिलीग्राम पान्टोप्राजोल वा ome० मिलीग्राम एसोमेप्रजोल प्राप्त गर्न अनियमित गरिएको थियो। दुबै पीपीआईहरू भेटिए समान प्रभावकारी तुलनात्मक सुरक्षा र सहनशीलता को साथ।
तपाईंको लागि उत्तम उपचार विकल्पको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। तपाईको प्राथमिक हेरचाह प्रदायकले तपाईलाई डाक्टरमा सिफारिस गर्न सक्दछ जसले थप चिकित्सकीय सल्लाहका लागि ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजीमा विशेषज्ञता दिनुहुन्छ।
प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियमको कभरेज र लागत तुलना
प्राय: मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले प्रोटोनिक्स, पान्टोप्राजोलको जेनेरिक संस्करण ढाक्दछन्। मेडिकेयर कापीहरू pantoprazole को लागी $0देखि $ 17 सम्म हुन सक्छ। बीमा बिना, प्रोटोनिक्सको औसत नगद मूल्य $ 522 हो। यद्यपि, एकलकेयरबाट एक प्रोटोनिक्स कुपनको साथ, सामान्य लागत लगभग $ ११ हो।
केहि मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू नेक्सियम वा यसको जेनेरिक संस्करण, एसोमेप्रजोललाई कभर गर्न सक्दछन्। एसोमेप्रजोलका लागि मेडिकल कापीहरू $ १ देखि $ range१ सम्ममा हुन सक्छ। Nexium को औसत खुद्रा मूल्य निर्धारित मात्रा र शक्तिमा निर्भर गर्दछ $ 478। एकलकेयर नेक्सियम कूपनको साथ, औसत मूल्य लगभग $ २ to मा कम गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो, जेनेरिक संस्करण को रूप मा हो, जेनेरिक संस्करण को रूप मा
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो, जेनेरिक संस्करण को रूप मा हो, जेनेरिक संस्करण को रूप मा
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 17 $ 1– $ 41
एकलकेयर लागत + ११ + + २ +
प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियमको साझा साइड इफेक्टहरू
प्रोटोनिक्सको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, पखाला, मतली, पेट दुखाइ, बान्ता, ग्यास, चक्कर, र जोड़हरूको दुखाइ हो।
नेक्सियमको सामान्य साइड इफेक्टमा टाउको दुखाइ, पखाला, मतली, ग्याँस, पेट दुख्ने, कब्ज, र सुख्खा मुख समावेश छ।
पीपीआईको गम्भीर साइड इफेक्टहरू प्रायः दीर्घकालीन प्रयोगको साथ सम्बन्धित हुन्छन्। गम्भीर पक्ष प्रभाव ओस्टियोपोरोसिस सम्बन्धित हड्डी भंग, भिटामिन बी १२ को कमी, र कम म्याग्नीशियम स्तर (hypomagnesemia) समावेश हुन सक्छ।
टाउको दुखाई हो १२% हो ≥1%
पखाला हो %% हो ≥1%
कब्ज हो <2% हो ≥1%
सुख्खा मुख हो <2% हो ≥1%
मतली हो %% हो ≥1%
पेट दुख्ने हो %% हो ≥1%
बान्ता हो %% हो <1%
चक्कर हो %% हो <1%
ग्यास हो %% हो ≥1%
जोड़को दुखाई हो %% हैन -
स्रोत: डेलीमेड ( प्रोटोनिक्स ), डेलीमेड ( Nexium )
काउन्टर मा perioral जिल्द को सूजन को उपचार को लागी
प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियमको ड्रग अन्तर्क्रिया
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम, अन्य पीपीआई जस्तै, धेरै समान औषधीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। यी पीपीआईहरू अवलोकनको लागि पेटको एसिडिटीमा निर्भर रहेका अन्य औषधिहरूद्वारा अनुगमित वा बेवास्ता गर्नुपर्छ। ड्रग्स जो पेटको अम्लतामा अवशोषणको लागि निर्भर हुन्छन् फलामको नुन, एरोलोटिनिब, केटोकोनाजोल, र माइकोफेनोलेट मोफेटिल।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियमले एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिहरू, वा औषधीहरू जुन अक्सर एचआईभीको उपचार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ साथ अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। पीपीआईहरूले एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिहरूको रगतको मात्रा बढाउन वा घटाउन सक्छ, जसले विषाक्तताको वृद्धि जोखिम वा एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिहरूको प्रभावकारिता कम गर्न निम्त्याउँछ।
प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम वारफेरिनको प्रयोगले रक्तस्रावको खतरा बढाउन सक्छ।
नेक्सियम डायजेपामसँग मोनिटर वा बेवास्ता गर्नुपर्दछ किनकि यसले डायजेपमको रगतको स्तर बढाउन सक्छ र प्रतिकूल प्रभावहरूको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। नेक्सियम र क्लोपीडोग्रल सँगैको प्रयोगबाट पनि अलग रहनु पर्छ। नेक्सियम कम गर्न सक्दछ कसरी शरीरमा क्लोपीडोग्रलले काम गर्दछ, जसले रगतको थक्काको जोखिम बढाउन सक्छ।
औषधि औषधि प्रकार प्रोटोनिक्स Nexium
केटोकोनाजोल एन्टिफंगल हो हो
फेरस फ्युमरेट फलामको नुन हो हो
मेथोट्रेक्सेट इम्युनोसप्रेसन्ट हो हो
एरलोटिनिब केमोथेरापी हो हो
Diazepam बेन्जोडियाजेपाइन हैन हो
क्लोपीडोग्रल Antiplatelet हैन हो
प्रोटोनिक्स र नेक्सियमको चेतावनी
पीपीआईको लामो अवधिको उपयोगले हड्डी भ of्ग हुने खतरा बढ्न सक्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूमा जो अस्थिरोगको पहिचान भइसकेका हुन्छन्। हड्डीको खनिज घनत्व पीपीआईको साथ दीर्घकालीन उपचारको समयमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ।
केही बिरामीहरूले प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम लिने बेलामा तीव्र ट्युबुलोरन्टर्स्टिटल नेफ्रिटिस (टीआईएन) अनुभव गरेका छन्। नेफ्रिटिस मिर्गौलाको सूजन हो, जसले मृगौलाको कार्य घटाउन सक्छ।
पीपीआईको प्रयोग क्लोस्ट्रिडियम डिसफिइल-सम्बन्धित डायरियाको बढेको जोखिमसँग जोड्न सकिन्छ। निरन्तर पखाला लाग्नेहरूले निगरानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, विशेष गरी अस्पतालमा।
प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम लिँदा म्याग्नीशियम (हाइपोमाग्नेसेमिया) वा भिटामिन बी १२ (भिटामिन बी १२ कमी) को कम रगतको खतरा बढ्न सक्छ। त्यहाँ पीपीआईको साथ दीर्घकालीन उपचारमा हाइपोमाग्नेसीमिया र भिटामिन बी १२ को कमीको बढि जोखिम छ।
पीपीआई लिनु अघि अन्य सम्भावित चेतावनी र सावधानीहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
प्रोटोनिक्स बनाम नेक्सियमको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
प्रोटोनिक्स भनेको के हो?
प्रोटोनिक्स एक प्रिस्क्रिप्शन-मात्र पीपीआई औषधी हो जुन GERD सँग सम्बन्धित इरोसिव एसोफाइगिटिसको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रोटोनिक्स एक ढिलाइ-रिलीज ट्याब्लेट र तरल निलम्बनको रूपमा उपलब्ध छ। प्रोटोनिक्सको जेनेरिक नाम पान्टोप्राजोल हो।
नेक्सियम एक पीपीआई औषधि हो जुन एसिड रिफ्लक्स र ईन्डर्नको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ साथ साथै जीईआरडीसँग सम्बन्धित इरोजिभ एसोफैगिटिसलाई। यो पर्चेको साथ वा काउन्टर माथि उपलब्ध छ। नेक्सियम मुख्यतया ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूल वा तरल निलम्बनको रूपमा आउँछ। नेक्सियमको जेनेरिक नाम एसोमेप्राजोल हो।
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम एकै हुन्?
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम दुई पीपीआई औषधी हो जसले GERD, hypersecretory अवस्था र पेप्टिक अल्सरको उपचार गर्न सक्दछन्। जे होस्, ती फरक फरक सक्रिय तत्वहरु समावेश र फरक योगहरुमा आउँछ। प्रोटोनिक्समा पान्टोप्राजोल हुन्छ र नेक्सियममा एसोमेप्राजोल हुन्छ। प्रोटोनिक्सले वयस्कहरू र years बर्ष र अधिक उमेरका बच्चाहरूमा GERD लाई उपचार गर्न सक्दछ जबकि Nexium ले वयस्क, बच्चाहरू, र एक महिना वा सो भन्दा बढि उमेरका शिशुहरूमा GERD को उपचार गर्न सक्दछ।
के प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम राम्रो छ?
प्रोटोनिक्स र नेक्सियम प्रभावकारितामा समान छन्। सबै भन्दा उपयुक्त पीपीआई उमेर, चिकित्सा अवस्था, लागत, बीमा, र अन्य औषधि लिई भइरहेको आधारमा निर्धारित हुनेछ।
के म गर्भवती हुँदा प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम प्रयोग गर्न सक्छु?
प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम गर्भवती हुँदा सुरक्षित हुन सक्छ। जे होस्, ती उपयोग मात्र गर्न सकिन्छ यदि लाभ जोखिम बाहिर छ। हाल, त्यहाँ प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम गर्भावस्थामा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ भनेर देखाउनको लागि पर्याप्त अध्ययनहरू छैनन्। गर्भवती हुँदा GERD को उत्तम उपचारमा मेडिकल सल्लाहका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
मँ सुत्न को लागी कति मेलाटोनिन लिनु पर्छ
के म प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
जबकि मदिरा प्रोटोनिक्स वा नेक्सियमसँग अन्तर्क्रियाको रूपमा थाहा छैन, यसले एसिड भाटा र ईर्ष्यात्मक लक्षणहरू बिगार्न सक्छ केही व्यक्तिहरूमा। प्रोटोनिक्स वा नेक्सियम लिने बखत मदिराको प्रयोग संयममा सुरक्षित हुन सक्छ, तर यो सामान्य रूपमा सिफारिस गरिएको छैन।
सबैभन्दा प्रभावकारी प्रोटोन पम्प अवरोधक के हो?
सबै भन्दा प्रभावकारी पीपीआई उपचार को अवस्था, पीपीआई को खुराक, र एक व्यक्ति ले लिईरहेको अन्य औषधीहरु मा निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प निर्धारण गर्दा पीपीआईको लागतलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
नेक्सियम (एसोमेप्रजोल) एक प्रोटोन पम्प अवरोधक हो। अन्य प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरूले Prilosec (ओमेप्रजोल), Prevacid (lansoprazole), Aciphex (rabeprazole), र प्रोटोनिक्स (pantoprazole) समावेश गर्दछ। यदि GERD लक्षणहरू पीपीआईको साथ सुधार गर्दैनन्, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सट्टामा H2 ब्लकर औषधी सिफारिस गर्न सक्दछ। H2 ब्लकरका उदाहरणहरूमा पेपसीड (फोटोटाइडिन), Zantac (ranitidine), र Tagamet (cimetidine)।
के नेक्सियमले भाटालाई अझ खराब बनाउन सक्छ?
Nexium एसिड भाटाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सिफारिस भन्दा पहिले Nexium उपचार बन्द गर्नाले रिफ्लक्स लक्षणहरूको फिर्ती निम्त्याउन सक्छ। Nexium सबैको लागि समान काम नगर्न सक्छ। यदि नेक्सियमको साथ लक्षणहरू सुधार गर्दैनन् भने, अन्य उपचार विकल्पहरू सिफारिस गर्न सकिन्छ।
के गर्ने जब एक औषधि फिर्ता सम्झिन्छ
यो एंडोमेट्रियोसिससँग बाँच्न कस्तो छ
कसरी मांसपेशी relaxers तपाइँलाई निर्धारित गर्न को लागी
हामीलाई दैनिक कति भिटामिन डी चाहिन्छ?
एसिटामिनोफेन विरोधी भड़काऊ गुण छ
तपाइँ कम पोटेशियम को लागी के गर्न सक्नुहुन्छ